Android2သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် LG G4.4.4 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း Androidsis
Android2သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် LG G4.4.4 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်
ငါသတိပြုမိသောအရာတစျခု ကျွန်ုပ်၏ LG G2 ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြီးခဲ့သည့်ညစဉ်ညတိုင်းပဲတစ်ရက်အကြာ postedအထူးသနေ့၏တ 28 ဇွန်လ, ငါ၏ terminal ကို, တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းများသို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာကဲ့သို့သောမိုးသည်းထန်စွာ applications များ၏ကွပ်မျက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည် တိုက်တေနီယမ်အရန်ကူး Backup များ.
အရောင်များကိုပြသရန်နှင့်အဘယ်အရာကိုပြသနိုင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်း ကျွန်ုပ်၏ LG G2 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံး Antutu စမ်းသပ်မှု၏ပြန်ဆိုချက်တစ်ဖောင်းပွလာပြီ နီးပါးအချက်များLG ၏ Android 5.000 Stock ဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၀၀၀ လောက်ပိုများသည်။
ကျွန်ုပ်၏ LG G2 ကို ၀ ယ်သောအခါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလကလှိမ့်မည် Antutu မှ Android 4.2.2 သည်အချက် ၃၅၀၀၀ ကျော်သည်မှတရားဝင် update ကိုပြီးနောက် အန်းဒရွိုက် 4.4.2ဤရမှတ်များပတ်ဝန်းကျင်၏လျင်မြန်စွာကျဆင်းခဲ့သည် 25.000 အချက်များ.
အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ LG ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများထက်နည်းနည်းလေးသာရှိသည့်လွတ်လပ်သော developer များ၊ Google မှဗားရှင်းစတင်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် terminal model တစ်ခုချင်းစီအတွက် Custom Roms များကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားထိုကဲ့သို့သောချောမွေ့တည်ငြိမ်လမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ LG ၏ကိုယ်ပိုင် application များ၊ ကင်မရာနှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာများ၏တရားဝင်ဒရိုင်ဘာများမရှိခြင်းကြောင့်ဤအရာအားလုံးသည်ထုတ်လုပ်သူများမှထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများမှမောင်းနှင်သူများအားယာဉ်မောင်းများဖြန့်ချိမည်ဆိုပါကသူတို့အဘယ်အရာကိုရရှိမည်ကိုစဉ်းစားပါ။
အပြီးသတ်ဖို့, ငါနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြပါ ဒီညစဉ်ညတိုင်း Cyanogenmod roms ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်မွမ်းမံမှုများအစပိုင်းမှာတော့ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်အသုံးများသော Quick Memo ကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုလွဲချော်သော်လည်းယခုငါ၎င်းကိုအသုံးချပြီးကျွန်ုပ်၏ LG G2 နေ့ရက်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအနည်းငယ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံကိုတွေ့ရသည်။
သင်လိုလျှင်ယခုသင်သိ LG G2 စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်, ဒီသင်ခန်းစာကိုဖြတ်သွားဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ ငါဆံပင်နှင့်အတူရှင်းပြနှင့်မှမှန်ကန်သောလမ်းအချက်ပြဘယ်မှာ Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း Cyanogenmod Rom Nightly မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Android2သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် LG G4.4.4 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်
ကျွန်ုပ်၏ g2 တွင် cyanogenmod ကိုလည်းအသုံးပြုသော်လည်းဘက်ထရီသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာ (သို့) အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်အားကုန်သွားခြင်းကြောင့်လျော့သွားနိုင်သည်။
အန်တိုနီယိုအလွန်ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်, ငါ G2 မှာ cyanogenmod ကို install လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ terminal ထဲမှာဘက်ထရီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှုကြောင့်ငါဝယ်လိုက်တာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ငါ့ဘက်ထရီကိုငါစွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ မင်္ဂလာပါ
စနစ်သည်ဘက်ထရီပိုမိုသုံးစွဲသည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်နေ့လုံးအသုံးခံနိုင်သည့်ဘက်ထရီအပိုင်းအစတစ်ခုဖြင့် terminal အတွက်အဟန့်အတားမဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၌၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးတစ်နေ့လုံးကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Cristian R ကို ဟုသူကပြောသည်
ဖရန်စစ်စကို, ဒီမွမ်းမံမှုနှင့်အတူ RadioFM ရှုံးနိမ့်ကြောင်းမှန်ပါသလား နောက်မှပြန်ယူနိုင်မည်လော
Cristian R ကိုပြန်ပြောပါ
ကင်မရာကော။ တရားဝင် ROM နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်ပုံများ၏အရည်အသွေးဆုံးရှုံးသွားပါသလား။
Pedro ချီလီ ဟုသူကပြောသည်
ငါ lg g3, cloud 1.3 ကိုသုံးပြီးအကောင်းဆုံးကိုပြေးသည်။ 4.4.2 ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခင်က ၃၄၄၀၉ မှတ်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ပုံမှန် g34409 ထက်ကျော်လွန်နေပြီး xiaomi mi2 သည် M3, S8 သာဖြစ်သည်။ Y မှတ်ချက် ၃ ။
Pedro chile သို့ပြန်သွားပါ
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ superrrr .. 4g၊ ရေဒီယို၊ 4K ထဲရှိကင်မရာရိုက်ကူးခြင်း၊ အကောင့်များထပ်တူပြုခြင်းနှင့်အရာအားလုံးအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ပြီးတော့ဘက်ထရီကပြောနေတာတော့ ... ငါ ၁၀ နာရီလောက်နေခဲ့ပြီးပြီ၊ ၆၂% လောက်ပဲကျန်သေးတယ်၊ ကွန်ယက်တွေ၊ အညွှန်းတွေ၊ အကောင့်တွေ၊
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်တယ်လီဖုန်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံး၏တယ်လီဖုန်းအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်အားမူရင်းမဟုတ်သော Rom အားလုံးကိုထားလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ သူတို့ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် Lg g2 ရှိလို့အဲဒါကိုလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်မမြင်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလှည့်တာကကင်မရာနဲ့တခြားသူတွေလိုမျိုးအခြားအရာတွေကိုလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေအားလုံးထက်ပိုပြီးဘက်ထရီရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ အီးမေးလ် ၅ ခုတသမတ်တည်းဖြစ်သွားတယ်၊ WhatsApp၊ BlackBerry Messenger၊ ငါတစ်နေ့လုံးသွားလာနေတယ်။ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင်လိုငါမပို့နိုင်သေးဘူး၊ အနည်းငယ်နံနက်စောစောမှမနက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းအထိကြာရှည်သည်။ ရည်ညွှန်းဖို့ပိုမရှိဘဲ။
ငါ 4.2.2 အသုံးပြုနေဆဲမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အဆက်အသွယ် blockers ဆုံးရှုံး။ Nova launcher နှင့် titanium bk မှ friceos တစ်စုံနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံအမှတ် ၄၀၈၉၅ ရရှိသည်
Orlando က ferreras ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ မနေ့က Rom Night CM11 ကို Android 4.4.4 ဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်သည်ထက်မက။ Francisco Ruiz ပြောသကဲ့သို့၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး interface တွင်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသည်။ ငါ Android L ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို install လုပ်ပြီး Android 5.0 နဲ့တူတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့စျေးကွက်ထဲမှာစမတ်ဖုန်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စီးဆင်းနေတာကိုတောင်သတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပြီးအရသာပေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါကသင်နောင်တမရပါ။
Orlando Ferreras အားပြန်ကြားပါ
LG G2 D800 တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား
Samsung Galaxy အသစ်လေးခုသည်အနိမ့်ဆုံးသို့ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်